USA အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား USA ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှနေထိုင်ခြင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်ခြင်း။ , ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ယူအက်စ်တွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်အေ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယူအက်စ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ရွှေဗီဇာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုတိယမြောက်ဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ယူအက်စ်တွင်ရွှေဗီဇာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အမေရိကန်ဗီဇာအမေရိကန်၊ ယူအက်စ်အေအတွက်ဗီဇာအစီအစဉ်, USA တွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
အိမ်ခြံမြေ | ချည်နှောင်ခြင်း | လှူဒါန်းခြင်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | သင်ရွေးချယ်သောစီးပွားရေး
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့် USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
လျှို့ဝှက် | တရားဝင်ဖြေရှင်းချက်များ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် USA သို့အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: အမေရိကန်ဒေါ်လာ 500,000 မှ USD 1 သန်း +
ယူနိုက်တက်စတိတ်, အမေရိကန်သို့မဟုတ်အမေရိကန်အတိုကောက်မြောက်အမေရိကအတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းတွင်းပိုင်း၏ဗဟိုနယ်နိမိတ်များကိုပိုင်ဆိုင်သည့် ၄၈ ခုသောပြည်နယ်များ မှလွဲ၍ အမေရိကန်သည်အလက်စကာပြည်နယ်နှင့်မြောက်အမေရိက၏အနောက်မြောက်ထူးခြားသောအနောက်ဘက်နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိဟာဝိုင်ယီကျွန်းနယ်မြေနှင့်ပေါင်းစည်းသည်။
ယူအက်စ်အေတွင်နေ့စဉ်တည်ရှိမှုသည်များစွာသောရွေးချယ်စရာများရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၁၀ သန်းအောက်စတုရန်းကီလိုမီတာအောက်မျက်နှာပြင်ဇုန်ရှိပြီးအမေရိကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်အေကိုသင်၏နေအိမ်အသစ်ဖြစ်စေပြီးသင်၏စိတ်ချရသောအမေရိကန်အခြေအနေတွင်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အနေအထားကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ သငျသညျဆူညံနေသောမြို့သို့မဟုတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမြို့ဆီသို့ ဦး တည်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပင်, လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်areaရိယာ USA တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကွဲပြားသောအမေရိကန်အခြေချသူများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူပါ။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုသည်အမေရိကတွင်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်ကြသနည်း။ လက်ရှိသင်တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမေရိကန်အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ US Green Card သည်အခြေအနေအားလုံးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားသားများဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ကြပါ - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမေရိကန်နိုင်ငံ ၅၀ တွင်မည်သည့်နေရာ၌နေထိုင်ရန်သင့်လျော်မည်နည်း။ အမေရိကသည်၎င်း၏မျိုးစုံအတွက်လူကြိုက်များသည်။ သင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်ထမ်းဆောင်သူတစ် ဦး အနေနှင့် - အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ထောင့်မှန်သမျှသည်မည်မျှကောင်းမွန်ပြီးမတူကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။
သင်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းမှအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့သွားသောအခါလေထုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီပြောင်းလဲသွားသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်သင်အမေရိကန်သို့သွားသည်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သောလှုပ်ရှားမှုဇာတ်လမ်းကိုဝမ်းမြောက်စွာပြောပြမည့်အမေရိကန်များနှင့်သင်သေချာစွာတွေ့ဆုံပါလိမ့်မည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကဖော်ပြသည့်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန် (၄.၁) သန်းခန့်သည်မူလ (အကျွမ်းတဝင်မရှိသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူ) များဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၁၃.၅% ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ဘယ်သူသိလည်းသင်ချက်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကန ဦး အဆင့်မှာယူအက်စ်အေသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယမှာသင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်အေရှိအိမ်သို့မဟုတ်ကွန်ဒိုမရှာခင်သင်သိထားသင့်သည့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ အစအ ဦး ၌၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်းခိုရန်အတွက်သင့်လျော်သောပမာဏကိုအကြီးအကျယ်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၌ယခုအလုပ်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကူညီသည်။ အဆက်အသွယ်အများဆုံးလတ်ဆတ်သောအမျိုးအစားများအနက်တစ်ခုမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နေရာအများစုတွင်အဓိကအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များရှိအတည်ပြုသောနေရာများနှင့်သင်၏ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည်အီးမေးလ်ကိုတတ်နိုင်သမျှမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်ကိုသင်ယခုသဘောပေါက်နိုင်သည်။
အီးမေးလ်နှင့်အင်တာနက်သည်ကျယ်ပြန့်သောအချက်အလက်များကိုကုန်သွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ပိုမိုတတ်နိုင်စေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သငျသညျ States မှာပေါ်လာတဲ့အခါ, သင် PC များနှင့်အင်တာနက်အသင်းအဖွဲ့များကိုအကြောင်းပြချက်အများစုပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်၊ အီးမေးလ်သည်အမေရိကန်လူမျိုးမြောက်များစွာ၏လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ပုံမှန်စာများပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသည်အမေရိကန်သို့ပထမဆုံးပြောင်းရွှေ့သောအခါမိသားစုသို့မဟုတ်အဖော်များနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။ ၀ က်ဘ်ပေါ်မှအိမ်တစ်အိမ် (သို့) အိမ်ခေါင်မိုးကိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူးနိုင်သော်လည်း (ဥပမာအားဖြင့်သင်ပြည်နယ်များသို့မထွက်ခွာမီ) သင်အမေရိကန်၌ရှိနေစဉ်တည်းခိုရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်မြေပိုင်ရှင်အများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေထိုင်သူများနှင့်မကြာခဏတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ပြီးသင်နေထိုင်ရာနေရာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ USA တွင်တည်းခိုရန်ရှာဖွေခြင်းသည်သင် USA တွင်ရှိစဉ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 500,000 မှ USD 1 သန်း +
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
EB-5 Immigrant Investor အစီအစဉ်
ယူအက်စ်အေ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
လူနေမှု5နှစ်ပြီးနောက်
အဘယ်ကြောင့်ယူအက်စ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ယူအက်စ်သည်ပုဂ္ဂလိကနှင့်စီးပွားရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်အလိုရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ EB-5 ဟုခေါ်သည့်နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်လျှောက်ထားသူနှင့်သူ / သူမ၏မိသားစုအား ၁၈-၃၀ လအတွင်းအစိမ်းရောင်ကဒ်ဝယ်ယူပြီး ၄ နှစ်အကြာတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်မည်သည့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု၊ စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးကိုသက်သေပြရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထို့အပြင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောဒေသတွင်နေထိုင်ရန်လည်းမလိုအပ်ပါ။ နေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးနောက်သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆို နေထိုင်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ၂၁ နှစ်အောက်ကလေးများပါဝင်နိုင်သည်။
Residency USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် insite
ပထမ ဦး စွာသင်နေထိုင်မှုအစီအစဉ်အတွက်သင့်လျော်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရမည်၊ ရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းငွေစာရင်းသို့အပ်နှံပြီးလျှောက်လွှာတင်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၁၂-၁၈ လအတွင်းပြုလုပ်သည်။ ပရိုဂရမ်အများစုသည်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်လျှင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ပေးသည်။ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်သင် ၆-၉ လအတွင်းဗီဇာနှင့်သင်၏အခြေအနေအမြဲတမ်းနေထိုင်သူအဆင့်အတန်းကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပြီးပါကအစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
နေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာ2ရှိပါတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်သောဒေသဆိုင်ရာစင်တာတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။ အနည်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၁၀ ခုဖန်တီးရမည်။ ဤရွေးချယ်မှုအတွက်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁ သန်းနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်မားသောတောနယ်မြေများတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ ဖြင့်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအမေရိကန်အလုပ်သမား ၁၀ ယောက်ကိုသင်ခန့်ထားရမည်။
နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလေးနှစ်ထားရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးအမြတ်များနှင့်စွန့်စားရမှုများသည်ဈေးကွက်အင်အားစုများနှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်သည်။
အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် ယူအက်စ်မှဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ အမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၃၇ နိုင်ငံမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် USA မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာမဟုတ်ပါ၊ အမေရိကန်မှဖြစ်စေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်စေဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်။ အမေရိကန်၌အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ယူအက်စ်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ယူအက်စ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ယူအက်စ်အတွက်၊ အမေရိကန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်
ယူအက်စ်အေမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ယူအက်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ယူအက်စ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ယူအက်စ်မှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ယူအက်စ်အေရှိ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ယူအက်စ်မှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ယူအက်စ်အေမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ယူအက်စ်မှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်။
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အထူး Residency ။
USA တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည် USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့မှပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် USA Residency
ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကအမေရိကန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
Duration: 1-3 ရက်ပတ်လုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ အမေရိကန်သို့မဟုတ်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကို USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်၊
ယူအက်စ်အတွက်တရား ၀ င်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Duration: 1 နေ့က
သင်၏ Residency နှင့် USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လျှောက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
Duration: 1 အပတ်က
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency ။ ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါက၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို USA မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်အမေရိကန်မှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် ယူအက်စ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသို့မဟုတ်အမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာသူလျှိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ယူအက်စ်အေ၌တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် ယူအက်စ်အေရှိမျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ယူအက်စ်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ယူအက်စ်အတွက်အထောက်အပံ့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကုန်သွယ်ရေး၊ အမေရိကန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် USA တွင်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယူအက်စ်အေရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် USA တွင်ရှေ့ရပျ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်အမေရိကန်နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျစွာသတ်မှတ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအာဏာပိုင်များထံမှလျှောက်လွှာကိုလက်ခံခြင်းအတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အမေရိကန်၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် USA အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့သော USA သို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသော USA အတွက်ဥပဒေအကျိုးဆောင်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
အဆက်အသွယ် 1 ပွိုင့်
သင်၏ Residency USA သို့ USA နှင့်ခွင့်ပြုချက်မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စီးပွားရေးအတွက် (သို့) USA သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့ရှိရန်ဖြစ်သည်
Residency တွင်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်ကို USA အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအားတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏သက်တမ်းအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ယူအက်စ်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ကလေးများ အဘယ်သူမျှမ Yes
၁၈ နှစ်အထိကလေးများ 12345
၁၈ နှစ်အထက်ကလေးများ 12345
၅၅ နှစ်ကျော်မိဘများ အဘယ်သူမျှမ Yes
မိဘအရေအတွက် - 12345
ပုံစံ ဗီဇာ အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်
ယာယီနေထိုင်ခွင့် USA တွင်
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ USA တွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူအမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်အမေရိကန်ကိုတတ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်မည်နည်းနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းမှ Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်၊ စီးပွားရေးနှင့်အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကို USA တွင်ပေးသည်။ ၎င်းကို USA မှအခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသော USD နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီစေရန်အတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ အမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများ၏အကူအညီဖြင့် USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ USA တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (USA တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ယူအက်စ်အေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ယူအက်စ်အေရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase အဘို့, USA တွင်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ယူအက်စ်အေအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် အမေရိကန်ကိုသင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင် USA တွင်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ USA တွင်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ယူအက်စ်အေရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ယူအက်စ်အေရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ယူအက်စ်အေအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
USA အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
USA အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ USA အတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, USA တွင်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
USA ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Virtual ရုံး 65 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများမှာလိပ်စာ။
ယူအက်စ်အေတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
ယူအက်စ်အေမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု.
USA တွင်အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်
USA တွင် Web Design
ယူအက်စ်အေတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
USA တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူအက်စ်အတွက် App ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ယူအက်စ်အေအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားတရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အမေရိကန်အတွက်၊ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်၌အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ရှေ့နေသည်သင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် USA တွင်ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ် USA သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည် USA သို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ယူအက် ​​(စ်) ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှအက်ပလီကေးရှင်း (သို့) တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ယူအက်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုအမေရိကန်၏စီးပွားရေးတွင်အိမ်ရာ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်အမေရိကန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်အမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်သည်။ ယူအက်စ်အေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ အမေရိကန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း USA တွင်။
ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ယူအက်စ်အေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ယူအက်စ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အမေရိကန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမေရိကန်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ယူအက်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ ယူအက်စ်အေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်အမေရိကန်ရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
အမေရိကန်အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အမေရိကန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အမေရိကန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | အမေရိကန်အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအမေရိကန်စီးပွားရေး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူအက်စ်ယူအက်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်လျှောက်ထား ယူအက်စ်အေအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသောဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ယူအက်စ်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ယူအက်စ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ယူအက်စ်အေအတွက်ဒုတိယအနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ယူအက်စ်တွင်ရွှေဗီဇာအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယူအက်စ်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်ဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုယူနိုင်သည်။ အမေရိကန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားသည်။ ယူအက်စ်အေအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ အမေရိကန်ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်အမေရိကန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ယူအက်စ်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ယူအက်စ်ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ယူအက်စ်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူအက်စ်အေရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ယူအက်စ်အေများအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
အမေရိကန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
အမေရိကန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ မှ ၁ သန်းအထိဖြစ်သည်။
Residency အတွက် USA အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်အမေရိကန်မှအေးဂျင့်များသည် Residency ကို USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှအမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ အာဖရိကမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ဥရောပမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ တောင်အမေရိကမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Residency၊ မလေးရှားမှအမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှအမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှအမေရိကန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါနိုင်ငံမှ USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှအမေရိကန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှ USA သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်
အမေရိကန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
Los Alamos အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း
Tennessee ပြည်နယ်ချိုင့်အာဏာပိုင် (TVA)
ပြည်တွင်းအခွန်များဌာန (IRS ကို)
ရေဒီယိုအခမဲ့ဥရောပ / ရေဒီယိုလွတ်လပ်မှု
Federal Reserve System ၏အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့
အစိုးရအမျိုးသားအပေါင်ခံအသင်း (Ginnie Mae)
ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက် ၀ န်ဆောင်မှုဌာန (IMLS)
တရားရေးရုံး (OJP) ရုံး
Nuclear စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနည်းပညာဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (NWTRB)
ငွေကြေးဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်ကွန်ယက် (FinCEN)
နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုအတွက် Federal Laboratory Consortium (FLC)
၀ န်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုရုံး (OPM)
Merit Systems Protection ဘုတ်အဖွဲ့ (MSPB)
လောရင့် Livermore အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း
Interactive မှ Tariff နှင့်ကုန်သွယ်ရေး DataWeb (သွင်းကုန် / တင်ပို့သည့်ဒေတာ)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ငံများ
Mauritius အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency
Mayaysia အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency
နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ Antigua တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း Domnica တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
Saint Kitts တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
link ကိုမှ ယူအက်စ်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန USA တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်
နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။ ဆက်သွယ်ရန်